ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ပြုပြင်ခြင်း - Shenzhen Mcldosly Tech Co., Ltd.
မူရင်း Sony Playstation၊ Xbox နှင့် Nintendo Controllers အတွက် ကွန်ထရိုးကို ပြုပြင်ခြင်းတွင် ကျွမ်းကျင်သည်။
Original Playstation3Controller၊ Playstation4Controller နှင့် Playstation5Controller တို့ကို ပြုပြင်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ ရှိသည်။မူရင်း Xbox ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် Xbox 360 ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ Nintendo Switch Pro Controller နှင့် Nintendo Joy-con Controller။ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်စီးနေသော ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ပြုပြင်ရုံသာမက အခွံအသစ်ကို ပြောင်းလဲကာ အသစ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ကုန်ကျစရိတ်မှာ 8usd-15usd မှဖြစ်သည်။
1. ဖောက်သည်များသည် ပျက်စီးနေသော controller များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ရန်တာဝန်ရှိပြီး၊ ထို့နောက် controller ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်၊ controller fix ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် invoice ကိုထုတ်ပေးပြီးနောက် customer သည် ပြုပြင်စရိတ်ကိုပေးချေပြီး၊ ပြုပြင်မှုပေးချေမှုကိုရရှိသောအခါ၊ ဖောက်သည်များထံ ပြန်လည်ပို့ဆောင်သည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ကျွန်ုပ်တို့ စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပို့ဆောင်ခနှင့် စိတ်ကြိုက်ရှင်းလင်းရေးကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ဖောက်သည်များက ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် စိတ်ကြိုက်ရှင်းလင်းမှုကို အပြီးသတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ကူညီနိုင်ပါသည်။
2. ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲသော သို့မဟုတ် ပြုပြင်မရနိုင်သော ပျက်စီးနေသည့် controller နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မားသားဘုတ်ကို သုံးစွဲသူထံ ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖောက်သည်ထံသို့ ကုန်ကျစရိတ်တစ်စုံတစ်ရာ ကောက်ခံမည်မဟုတ်သည့်အတွက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူသူထံ ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်အမှာစာများအတွက်၊ 85% မှ 92% ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ပြီး ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အမြဲအာမခံနိုင်ပါသည်။